Josafata - Wikipedia
I Josafata dia mpanjakan'i Jodà nandritra ny 25 taona taamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-9 tal. J.K. Nandimby ny mpanjaka Asa rainy teo amin'ny fitondrana izy ary ny mpanjaka Jehorama (na Jorama) no nandimby azy. I Azoba zanak'i Sily no reniny ary nanan-janaka lahy fito izy, dia i Jehorama, i Azaria, i Jehiela, i Zakaria, i Azaria, i Mikaela ary i Sefatia.
Atai hoe יְהוֹשָׁפָט / Yehôshāphāt) izy amin'ny teny hebreo fa ᾿Ιωσαφὰτ / Iôsaphat fa amin'ny teny grika ary Iosaphat kosa amin'ny teny latina. Ny Baiboly amin'ny teny malagasy dia manoratra hoe Josafata.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Josafata&oldid=973980"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2019 amin'ny 10:41 ity pejy ity.